MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-04-07
2013 April (13) ya shani hkying (4:00)pm aten hta Laiza Muklum, Munglai Hka mahkrai pawt kaw hka jaw poi (Tingyan) galaw hpang sai lam hpe chye lu ai.
Ndai Hka Jaw Poi hta Hpunau Jawngma Dap (ABSDF) hte kaga Amyu sha Dap hpawm ni mung sa du shang lawm nna 2013 April (13-16) du hkra galaw na re lam hpe chye lu ai.
at 4/13/2013 11:13:00 PM No comments:
လနားဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း တွင် ရေခက်ခဲမှု နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရ
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၂၇၀၀ ကျော်ခိုလှုံနေသည့် လနားဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သုံးစွဲရန်ရေ အခက်ခဲပြဿနာ နေ့စဉ်ရင်နေရကြောင်းသိရသည်။
သုံးစွဲရန် ရေများခက်ခဲသောကြောင့် လနားဇွပ်ဂျာ (Lana Zup Ja) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အိမ်သာ ၈၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် အိမ်သာ ၃၀ ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့သုံးစွဲရန်ရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် လောလောဆယ်ဖျားနာမှုများမရှိသော်လည်း ဆက်လက်၍ ရေပြဿနာများဖြစ်နေလျင် တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအတွက် ကျန်းမာရေးများ စိုးရိမ်စရာရှိကြောင်း ဒုက္ခသည်စခန်းမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
at 4/13/2013 12:34:00 AM No comments:
ကချင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလ အကူအညီ အစိုးရ ခွင့်ပြုချက် မရသေး
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ပစ္စည်းများ သွားရောက်ကူညီမည့် အစီအစဉ်ကို အစိုးရခွင့်ပြုချက် စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအေးဝင်း က ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးရန် အဆင့်ဆင့် တင်ပြထားမှု မကျသေး၍ သွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ၎င်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
at 4/13/2013 12:32:00 AM No comments:
at 4/12/2013 01:00:00 PM No comments:
KIA Masat Yan (5) Hpyen Du Shalat Jawng Yu Hpawng Galaw
2013 April (11) ya shani Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap, Ninggawn Daju, Dai Lawn RungaMasat Yan (5) Hpyen Du Shalat Jawng yu lamang hte Daru Magam Ahkang Aya ap ya ai hpawng hpe Hpyen Du Shalat Jawng, Woi Chyai Bum hta ngwipyaw awngdang ai hte galaw la lu sai lam hpe chye lu ai.
Masat Yan (5) Hpyen Du Shalat JawngaDaru Magam Ahkang Aya ap hpawng hpe jahpawt hkying (8:00) am aten, Woi Chyai Bum, Daru Magam Gawk Nu hta Hpyen Du Shalat Jawng, Ningtau Jawng Up, Du Up Lahtaw Myu Awng kaw nna Hpyen Du Jawngma ni hpe Daru Magam Ahkang Aya hte Lat Du shalun (Order) hti ndau ya ai hpang Hpyen Du Shalat Jawng Up, Lat Du Up Jum Labang Grawng kaw nna Hpyen Du Jawngma ni hpe Daru Magam Ahkang Aya ap ya nna jawng yu shatsam mungga jaw ya ai lam hpe chye lu ai.
at 4/12/2013 12:52:00 PM No comments:
at 4/12/2013 12:32:00 PM No comments:
at 4/12/2013 12:21:00 PM4comments:
at 4/11/2013 11:40:00 PM 1 comment:
at 4/11/2013 06:33:00 PM No comments:
KIA Masat (1) Dap Dung, Manje Hte Nazaret Mayan Kaw Gasat Poi Byin
KIA Masat (3) Dap Ba, Masat (1) Dap Dung makawp maga ginra kata hta 2013 April (10) ya jahpawt hkying (9:00)am aten laman, Lahta Sam Mung, Simli Daju ai Myen Asuya Hpyen Dap Hk.M.Y (240) dap kata na hpyen hpung ni htim gasat lung wa ai majaw KIA Masat (1) Dap Dung kata na hpyen hpung ni Man Je hte Nazaret lapran kaw ninghkap shingla gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
at 4/11/2013 06:14:00 PM No comments:
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလတွင်း အစိုးရစစ်တပ်မှ အင်အားတိုးချ ထိုးစစ်ဆင်လာသောကြောင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ KIA ဖက်မှ နောက်ဆုတ်ထားလိုက်ချိန်မှစ၍ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးနယ်မြေများတွင် အစိုးရကုမ္ပဏီများနေရာယူသွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
at 4/11/2013 06:02:00 PM No comments:
ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်လာသော ကုလသမဂ္ဂ ယာဉ်တန်းကို အစိုးရ တားမြစ်
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) ရှိ ပါကထောင် (Pa Kahtawng) ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များ၏ ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်လာသော ယာဉ်တန်းများအား ဗန်းမော်အစိုးရမှ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းသိရသည်။
ကူညီပေးရန် လာနေသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့(၄)ဖွဲ့၏ မော်တော်ယာဉ် (၇) စင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးပါလာခြင်းကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်က ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်သည့် မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang) သို့ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်အတွက် အထက်ကိုပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်၍ တားမြစ်လိုက်ဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်ကော်မတီမှပြောသည်။
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinpraw Ginwang Dap Ba (3) ginra Manmaw - Manje makau na Dung (1) niaginra Lung Ja Post hpe myen hpyen ni madu la mayu ai majaw, dai hpawt April (10) ya jahpawt kawn sa htim gasat ai majaw KIA Mung Shawa Kanawn Mazum Hpung (MKM) ni hte gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen maga na n gun (80) jan hte htim gasat wa ai re lam na chye lu ai. Du Sumlut Bawk oi awn ai MKM hpung ni hte myen tai hpyen ni ya ten Ma Je makau na Pa Baw kaw laja lana gap gasat nga ai lam na chye lu ai.
at 4/10/2013 08:49:00 PM No comments:
at 4/10/2013 08:45:00 PM No comments:
အစိုးရနှင့် KIO မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲ တရုတ်ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းထားရ ဟု ကချင်အဖွဲ့များ ဆို
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကြား ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့ ကချင်ပြည် နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကျင်းပမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသည် တရုတ်အစိုးရ ကန့်ကွက် ခြင်းကြောင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရကြောင်း ကချင် အဖွဲ့အစည်းများပြောသည်။
ရွှေ့လိုက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ တွေ့ဆုံမှုတွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အမေရိန်ကန်နိုင်ငံများ ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆက်လက် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်အစိုးရမပါဝင်ပဲ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါကလည်း ကန့်ကွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
at 4/10/2013 08:44:00 PM No comments:
ဂျပန် ၀န်ကြီး ချုပ်၏ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အပေါ် သဘောထား
သွေးစည်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) သည် ဂျပန် ၀န်ကြီး ချုပ်၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ဂျပန် နိုင်ငံသို့ ဒုတိယ အကြိမ် ခရီးစဉ် အဖြစ် သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။ ထိုခရီး စဉ်တွင် UNFC ကိုယ်စားလှယ် (၂၃) ဦး၊ သွားရောက် ခဲ့ပြီး၊ ခရီးစဉ်မှာ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေးသည် UNFC အဖွဲ့ဝင် များကို နာရီ ဝက်ခန့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ တွေ့ဆုံ ရာတွင် ၀န်ကြီး ချုပ်သည် မြန်မာ့ နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပဋိ ပက္ခ များ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာ ကြရန် တိုက်တွန်း ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ပပျောက်ရေး နှင့် လူနေမှု ဘဝ မြင့်မားရေး ကဏ္ဍ များတွင်လည်း ပံ့ပိုး ကူညီ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေးမှ ကတိပြု ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း UNFC ကိုယ်စားလှယ် တဦးက ဆိုပါသည်။
at 4/10/2013 08:43:00 PM No comments:
လာမယ့်နွေရာသီကာလမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှု ကြုံရမယ့်အခြေအနေကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင် အခုလိုရေပေးဝေလှူဒါန်းတာဖြစ်ကြောင်း ဒိန်းမတ်ကြက်ခြေနီအသင်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် Mariana Liptuga က RFA ကို ပြောပါတယ်။
at 4/10/2013 08:41:00 PM No comments:
at 4/09/2013 03:57:00 PM No comments:
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း KIA နှင့် အစိုးရ ၃ နေရာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၄ နယ်မြေတွင် အစိုးရနှင့် ယနေ့ ၃ နေရာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်ဖွဲ့သည် KIA နှင့် တအောင်း (ပလောင်) စုပေါင်းတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ ဧပြီ ၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်ထိ တပ်မဟာ ၄ လက်အောက် တပ်ရင်း ၂ နယ်မြေ မန်လောင်းရွာ အနီးတွင် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 4/09/2013 03:24:00 PM No comments:
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့နေရာမှာ အသွင်သဏ္ဍာန်ပဲဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာထက် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင် ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားရလိမ့်မယ်လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် ရှမ်းလူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင် ဦးညီညီမိုး က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့  ဗွီအိုအေရုံးခွဲမှာ အယ်ဒီတာဒေါ်ခင်စိုးဝင်း က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း။ ။ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အတော်များများနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေလည်း ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ရှိပါတယ်။ ကချင်နဲ့လည်း အခုဆွေးနွေးနေတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ဦးညီညီမိုးတို့ရဲ့  မျိုးဆက်သစ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ အခုလောလောဆယ် လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုများ သဘောရပါသလဲရှင့်။
at 4/09/2013 03:19:00 PM No comments:
at 4/09/2013 03:09:00 PM No comments:
အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် သတ်မှတ် ရက်ကို UNFC ရွှေ့ဆိုင်း
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) သည် အစိုးရနှင့် မူလက သဘောတူ ထားသည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု UNFC အတွင်း ရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
“အစီ အစဉ် အရ ကတော့ အစိုးရက ကေအိုင်အိုနဲ့ တွေ့ပြီးရင် UNFC နဲ့ တွေ့ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ကေအိုင်အိုနဲ့ ထပ်တွေ့၊ အဲဒီ လိုကို စီစဉ် ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အဲဒီ အခင်း အကျင်းက KIA နဲ့ အစိုးရက မြစ်ကြီးနားမှာ တွေ့မယ်ဟာ ရွှေ့သွားတော့ အဲဒီ အပေါ်မှာ အစီအစဉ် တွေက ပြောင်းသွား တာပေါ့” ဟု ဆိုပါသည်။
at 4/09/2013 03:07:00 PM No comments:
KIA နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခြင်း အပေါ် တရုတ် ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ် သံရုံးသည် KIA နှင့် အစိုးရကြား မြစ်ကြီးနား မြို့တွင် ကျင်းပမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပျယ် သွားသည့် အပေါ် ယမာန်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ် ကြေညာ ခဲ့ပါသည်။
တရုတ် အစိုးရ၏ ကန့်ကွက် မှုကြောင့် KIA နှင့် မြန်မာ အစိုးရ တို့၏ ဆွေးနွေး ပွဲကို မြန်မာ အစိုးရ ဖက်က ရက်ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်သည့် သဘောမျိုး မြန်မာ မီဒီယာ များက ထုတ်ပြန် ရေးသား နေသည်မှာ အခြေ အနေမှန်နှင့် လွဲချော် နေသည့် အတွက် တရုတ် သံရုံး အနေနှင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရ သည်ဟု ကြေညာ ချက်တွင်ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
at 4/09/2013 03:06:00 PM No comments:
at 4/09/2013 03:00:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ မမှန်မကန် လိမ်လည်စွပ်စွဲတယ်ဆိုပြီး ပုဒ်မ ၂၁၁ နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဖါးကန့်မြို့နယ်ဒေသခံ ဦးဘရန်ရှောင်ကို ဖားကန့်မြို့နယ် တရားရုံးက ဒီကနေ့မှာ ငွေကျပ် ၆ သိန်းနဲ့ အာမခံပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဖားကန့်မြို့နယ် မှော်ဝမ်းအုပ်စု (၁)၊ ဆွတ်ငိုင်ယန်ရပ်ကွက်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ရာမှာ ဦးဘရန်ရှောင်ရဲ့ သမီး နဝမတန်းကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိမ်ဟာ လက်နက်ကြီးကျည် အစိတ်အပိုင်းထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
at 4/09/2013 02:58:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီရေး ပစ္စည်းတွေဝေငှဖို့ ဗန်းမော်မြို့ကနေ လိုင်ဇာမြို့ကိုလာရောက်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ မော်တော်ယာဉ်တန်းကို အစိုးရတပ်ကသွားလာခွင့် ဆိုင်းငံထားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
အဲဒီယာဉ်တန်းမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး လိုက်ပါလာမယ်လို့ သိရတာကြောင့် ဆိုင်းငံ့ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့(၄) ဖွဲ့ရဲ့ မော်တော်ယာဉ် (၇) စီးပါ ယာဉ်တန်းဟာ ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့မှာ လိုင်ဇာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ လိုင်ဇာမြို့အနီး မိုင်ဂျာယန်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ အစိုးရစစ်တပ်က နိုင်ငံခြားသား ဖြတ်သန်းခွင့်အတွက် အထက်ကိုပြန်လည်တင်ပြဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး တားဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။
at 4/09/2013 02:51:00 PM No comments:
MyenAsuya Hpyen Dap, Hpyen Hpung Ni Laiza-Manmaw Lam Mayan Na Mung Shawa Arung Arai Ni Hpe Kam Mara Htaw La Nga
KIA Masat (5) Dap Ba, Masat (24) makawp maga ginra hta 2013 April (6) ya shani, Daw Hpum Yang Daju, Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (142) na hpyen hpung ni gaw Laiza-Manmaw lam mayan na Dingga mare, Hka La mare, Loi Mawk mare hte Dung Hung mare hkan na mung shawa niadum nta hkan na Cycle, Htaw La Gyi, hte shan hte ra ai arung arai ni hpe htaw la mat wa ai lam hpe chye lu ai.
at 4/07/2013 10:14:00 PM No comments: